ဇင်လင်း – နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည့်သည့်တိုင် ပင်လုံကတိ မတည်နိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ? | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇင်လင်း – နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည့်သည့်တိုင် ပင်လုံကတိ မတည်နိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
“စစ်နည်းဗျူဟာ ဘယ်လိုကြွယ်လည်း၊ စွဲကိုင်လက်နက် ဘယ်လိုထက်လည်း ပြည်သူ့နှလုံး မသိမ်းကျူံးလျှင်၊ ပြည်သူ့စွမ်းအား မကိုးစားလျှင်၊ ဓားသွားလည်း ကြွေအံ့၊ လှံလည်းခွေအံ့” ….တဲ့။